Firefox သည် Browser War တွင်အောင်မြင်ခြင်း | Martech Zone
Firefox သည် Browser War ကိုအနိုင်ရသည်
သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 8, 2006 တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 17, 2018 Douglas Karr
မကြာသေးမီက browsers များအတွက်စျေးကွက်ဝေစုကိုကြည့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မည်သူသည်စစ်ပွဲများကိုအနိုင်ရနေသည်၊ Firefox သည်အရှိန်အဟုန်ကိုဆက်လက်တိုးမြှင့်နေပြီး Safari ကအထက်သို့တက်နေသည်။ ဒီသုံးခုကိုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ငါ့ရဲ့သီအိုရီတွေနဲ့မှတ်ချက်ပေးချင်ပါတယ်။
Netscape Navigator ကိုဖျက်ဆီးပြီးနောက် IE သည်ပိုက်ကွန်၏ရွှေစံချိန်စံညွှန်းဖြစ်လာသည်။ browser သည်ရိုးရှင်းပြီးအလုပ်လုပ်သည်။ Microsoft ထုတ်ကုန်အားလုံးနှင့်ကြိုတင်တင်ထားသည်။ ActiveX သည်အနည်းငယ်သောလူများသည် IE ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဝက်ဘ်ပေါ်ရှိမတူညီသောစံချိန်စံညွှန်းများအားလုံးကိုပံ့ပိုးပေးသည့်အခါ၎င်းတို့သည်တစ်ခုသည်အဘယ်ကြောင့်မျိုးစုံဘရောင်ဇာများကိုသုံးရမည်နည်း။ ငါကိုယ်တိုင်ဗားရှင်း6မှတဆင့် IE အသုံးပြုသူဖြစ်ခဲ့သည်။
Internet Explorer7နှင့်ဝဘ်ဒီဇိုင်းကမ္ဘာသည် Cascading Style Sheets ၏နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့်အညီ၎င်းတို့အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သောဘရောက်ဇာတစ်ခုအတွက်အမှန်တကယ်သက်တောင့်သက်သာရှိနေခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, IE7စိတ်ပျက်။ IE Blog ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် browser သည် beta မလုပ်မချင်း web design လုပ်ငန်းမှနာကျင်မှုဝေဒနာများမခံစားရမချင်းရေဒါတွင်ပင်မရှိခဲ့ပါ။ အချို့သောနောက်ဆုံးမိနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအချို့သည်ပြtheနာအချို့ကိုတည့်မတ်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်ဒီဇိုင်းကမ္ဘာကိုပျော်ရွှင်စေရန်လုံလောက်မှုမရှိ။ သတိရပါ - ဒီဇိုင်းလောကရှိလူအများစုသည် Internet Explorer မရှိသော Mac များပေါ်တွင်လည်ပတ်နေကြသည်။ သို့သော်ကံမကောင်းစွာသူတို့အတွက်ဖောက်သည်များသည် Internet Explorer ကိုသုံးသည်။
သို့သော် Internet Explorer7နှင့် Microsoft သည်အသုံးပြုသူနှင့်သုံးစွဲသူအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ငါကဲ့သို့သော technophile အတွက်အပြောင်းအလဲအချို့သည်အေးမြသည်။ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသူအတွက်…မျက်နှာပြင်၏ထိပ်ကိုဖြတ်သန်း။ သွားလာရခက်ခဲခြင်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးရှုပ်ထွေးစေသည်။ သူတို့ကထွက်ရှိအခြားအဘယ်အရာကိုမှာစတင်ကြည့်ရှုကြ၏။ Firefox
ကနေ screenshot http://marketshare.hitslink.com/
Navigator သို့ပြန်သွားသောယေဘူယျ browser ၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုတုပ။ Firefox သည် Internet Explorer အတွက်ပိုမိုပေါ့ပါးသည့်အဖြေတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ပုန်ကန်သောမိုက်ကရိုဆော့ဖ်မင်းမဲ့စရိုက်များအတွက် Firefox သည်စိတ်အားထက်သန်လာပြီးဈေးကွက်ကိုစတင်ချေးငှားခဲ့သည်။
အခြားနည်းပညာများနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သော plugins များကဲ့သို့သောနောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်သည် Firefox အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအထောက်အကူဖြစ်သည်။ Firefox တွင်ခိုင်မာသည့် debugging၊ Cascading Style Sheet နှင့်တတိယပါတီ plugin များရှိပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ပေါင်းစည်းမှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
စျေးကွက်လည်းပြောင်းလဲနေသည်။ ActiveX အားလုံးသေပြီဖြစ်ပြီး Ajax သည်မြင့်တက်နေပြီး Firefox ကဲ့သို့သော browser များသို့သူကိုယ်တိုင်ငှားခဲ့သည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ Internet Explorer ကိုသုံးဖို့အကြောင်းပြချက်မရှိပါဘူး။ IE ကလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် Firefox ကပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Windows Updates သည် browser ကိုသုံးရန်လိုအပ်သော်လည်းယခုသူတို့သည်၎င်းကိုမပါဘဲ load နှင့် install လုပ်နိုင်သည်။
Firefox သည် Microsoft ၏ IE7ကဲ့သို့အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုနှင့် layout ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုသူများအနေဖြင့် IE6မှ Firefox သို့လွယ်လွယ်ကူကူကူးပြောင်းနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည် ၎င်းသည်ကြော့။ မြန်ဆန်ပြီးချောမွေ့သည်။
Mac ၏အိမ်တွင်း PC ဈေးကွက်သို့မကြာသေးမီကဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့်တက္ကသိုလ်များ၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအတွက် PC တော့မဟုတ်တော့ပါ။ ကျွန်တော့် Mac အသစ်မှာ OSX, Windows XP (Parallels နှင့်အတူ) လည်ပတ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိ browser တိုင်းကိုဒီဇိုင်းဆွဲ။ တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Safari ကိုကြိုတင်ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့် Macs သည်ရှယ်ယာများရရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ရှယ်ယာတိုးပွားလာမည်မှာသေချာသည်။ ကျနော့်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ Safari က Firefox ကိုရှုံးနိမ့်လိမ့်မယ်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ဟာအတော်လေးခြိမ်းခြောက်ခံရတယ်လို့ခံစားရရမယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကသူတို့ကိုယ်ပိုင်အမှားပဲ။ ၄ င်းတို့သည်ကိုယ်ပိုင် browser များ၊ ကင်းမဲ့သောသုံးစွဲသူများ၊ ကင်းသောဒီဇိုင်နာများ၊ စိမ်းကားနေသော developer များနှင့်အခြားသူများအတွက်၎င်းကိုအခြားဒေါင်လိုက် (မိုဘိုင်း) တွင်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသည်။
Internet Explorer သည်မိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းသာဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေဘယ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတာမသေချာဘူး။
Firefox ကို download ချပြီး install လုပ်ပြီးလျှင်၊ သွားပါ Add-ons တွေကို သင်၏နှလုံးပါ ၀ င်သည့်အရာများကိုကူးယူပါ။ ဤသို့ပြုလုပ်သူမည်သူမဆိုအတွက်၊ သင့်ကို browser ကိုသုံးပတ်လောက်အသုံးပြုဖို့သင့်ကိုငါနှစ်သက်တယ်။ ပြီးတော့ငါ့ site ကိုပြန်ပြီးမင်းမင်းဘာထင်လဲဆိုတာငါ့ကိုအသိပေးပါ။
ကျွန်တော်ဟာမိုက်ကရိုဆော့ဖ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာအခုဆယ်နှစ်ကျော်ပြီ၊ ကွမ်းခြံကုန်း။ သို့သျောလညျး, ငါ IE အဖွဲ့ကယ့်ကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့သို့စတင်ခဲ့သည့်မဟာဗျူဟာမြောက်ရှုပ်ထွေးဆွေးနွေးရန်ဖို့မဖြစ်မနေခံစားရတယ်။
Tags: browser ကိုစစ်browser များfirefox ကိုieအင်တာနက်ရှာဖွေသူ 7microsoftnetscape navigator
ငါ SOB တစ်ယောက်ပါ။
8:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 11, 36 တွင်
IE ကိုသုံးရန်အကြောင်းပြချက်မရှိတော့ကြောင်းကျွန်ုပ်သဘောတူသော်လည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်ကမ္ဘာကြီးသည်အင်တာနက်အတွေ့အကြုံမရှိသူများနှင့်ပြည့်နှက်နေဆဲဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်သောစကားသည်နောက်ဆုံးတွင်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။
ဒီဇင်ဘာ 9, 2006 မှာ 3: 54 AM
ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာ Firefox ၏ပျော်ရွှင်သောအသုံးပြုသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မရေမတွက်နိုင်သောတိုးချဲ့မှုများနှင့် Internet Explorer အပေါ်လုံခြုံရေးပိုမိုမြင့်မားခြင်းကြောင့်၎င်းကိုနှစ်သက်သည်။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်၏ MacBook Pro အသစ်ကိုရရှိသောအခါ Safari ကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း Firefox သို့ပြန်သွားခဲ့သည်။ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများသည်အကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်၏မိသားစုတစ်ခုလုံး (နှင့်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းအများစု) ကို Firefox သို့အောင်မြင်စွာပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာ 9, 2006 မှာ 11: 27 AM
ရှင်ပေါလုသည်ကျွန်ုပ်ကိုရှက်ရွံ့ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ phobias များကိုဖိုင်များသို့တည်းဖြတ်ခဲ့သည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့ရန်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကောင်းတဲ့သူကိုပေါလုထံမှကောင်းသောဖမ်း! ငါ့ကိုသိတဲ့လူတွေကငါဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုကျွမ်းကျင်အောင်ကြိုးစားတတ်တယ်ဆိုတာသိတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အရှက်မကွဲအောင်ကယ်တင်နိုင်တဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါ။
ဒီဇင်ဘာ 17, 2006 မှာ 1: 17 AM
Firefox သည် IE7သို့မဟုတ်၎င်းထက်ကျော်လွန်မည်ဟုကျွန်ုပ်လုံးဝသဘောတူပါသည်။
ရိုက်နှက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ Firefox Plugins နှင့် Firefox Add-ons များဖြစ်သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာ IE က ၃၅% အထိရပ်တည်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ 17, 2006 မှာ 2: 21 AM
Assalamu, Fazal ။ ကျွန်တော်သင်နှင့်သဘောတူသည်! Firefox3Alpha ထွက်နေပြီဆိုလျှင် Mozilla သည် Microsoft နှင့်မယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်လမ်းကြောင်းကိုတောက်ပနေသည်။
3:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 46 တွင်
ကျွန်ုပ်၏ desktop computr တွင် IE7 ကို install လုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုအချို့သော fiddled များအပြီးကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ် laptop ကို install လုပ်သောအခါ၎င်းသည်အရာရာတိုင်းကိုရပ်တန့်သွားစေခဲ့သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ပရိုဂရမ် (မည်သည့်ထပ်ဆောင်းထပ်ဆောင်းမှုများမှမရှိပဲ) ကျွန်ုပ်၏ပရိုဂရမ်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ပါကကျွန်ုပ်လုံးဝမတက်နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည်စိုးရိမ်ပူပန်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်၍ Foxfire ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုမသေချာပါ။ ငါကြိုးစားရန်ကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ငါကပိုအချက်အလက်လိုအပ်ပါတယ်။
3:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 7, 39 တွင်
မျက်မှောက်ခေတ်အွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းသည် Browser လိုက်ဖက်သည်။ စိုးရိမ်စရာမှာ SSL (Secure Sockets Layer) ကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဘရောင်ဇာနှင့်ဘဏ်၏အွန်လိုင်းဆာဗာများအကြားအချက်အလက်များဆက်သွယ်ရေးအတွက်စာဝှက်ထားသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Firefox သည် IL ကဲ့သို့ကန့်သတ်ချက်များမရှိသည့် SSL ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံသည်။ သင် SSL ကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုသိရန်ထင်ရှားသောနည်းလမ်းမှာသင် https: // လိပ်စာအစားအစားထိုးခြင်းဖြစ်သည် http://။ သို့သော် IE နှင့် Firefox (နှင့် Opera နှင့် Safari) နှစ်ခုလုံးတွင် SSL အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်စာဝှက်စနစ်မှန်ကန်ကြောင်းနှင့်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သောအမြင်ဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းများနှင့်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များရှိသည်။
တစ်နည်းပြောရရင်မင်းမှာပြissuesနာမရှိဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Firefox ကိုသူတို့ထောက်ခံမရသိရန်သင့်ဘဏ်၏“ Support” စာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးရန်ဘယ်တော့မျှမနာပါ။ သင်က၎င်းကိုကောင်းမွန်တဲ့ browser တစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
3:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 5, 50
Firefox သည်သန်း ၄၀၀ တန် downloads mark ကိုဖြတ်ကျော်သွားပြီးနောက်ထပ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ အခြားနည်းလမ်းများမှာတိုးတက်မှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်အနိုင်ရ browser ကိုစစ် ... နေဆဲကြောင်းအဘို့။
3:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 11, 24
ကျွန်ုပ်သည် IE ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ ဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းနှင့် Firefox ၏သုံးစွဲသူအဆင့်အားသာချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သုံးစွဲသူအများစုသည်ဂရုမစိုက်နိုင်ကြောင်းသံသယရှိသည်။ IE7အပြောင်းအလဲများသည်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးကြောင်းသင်သဘောတူသည်။
Daryn စိန့် Pierre
21:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 8, 11
IE7 ပေါ်မူတည်ပြီးသဘောတူပြီး ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့သဘောတူတယ်။ IE7 ကိုဖြန့်ချိလိုက်တာနဲ့အနည်းငယ်စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်အသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်လက်ရှိတွင်ကျွန်ုပ်သည် divs များရှိသော်လည်းအချို့သောကိစ္စရပ်များနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။ ငါအနည်းဆုံး IE7 ကိုသုံးခဲ့ပေမယ့် CSS support ကိုရည်ညွှန်းရာတွင် ၆.၀ မှခုန်လျှင်မြန်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာ Firefox အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးလမ်းတစ်လျှောက်ရှိအသုံးပြုသူအသစ်များကိုစုဆောင်းခဲ့ပါသည်။ ငါထင်တာကငါ့ကိုဆွဲဆောင်တဲ့အရာနဲ့တခြား FF အသုံးပြုသူတွေအများကြီးက ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူ / ဖော်ရွေမှုအဆင်ပြေစေတဲ့အပြင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကမောင်းနှင်တာဖြစ်တယ်။ ငါထင်သည် IE ဆက်လက်ကျဆင်းနေလိမ့်မည်ထင်နှင့် Microsoft ကဤအချက်မှာအံ့ဖွယ်အလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ Firefox ရရှိသောအရှိန်အဟုန်နှင့် Safari သည်ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးပွားလာနေခြင်းသည် IE ထက်သာလွန်နေပြီး၎င်းတို့သည် web စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသော browser ကိုထုတ်လုပ်ရန်ပျက်ကွက်နေခြင်းကသူတို့ကိုအနည်းဆုံးကူညီပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
22:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 7, 44
ဤထင်မြင်ချက်များသည်အထင်လွဲမှားနေသည်။ IE ၏ရှယ်ယာသည် ၂၀၀၅ Q85.88 အတွက်ကမ္ဘာအနှံ့ ၈၅.၈၈% မှ ၇၇.၅% အထိကျဆင်းသွားသည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ သုံးနှစ်အတွင်း ၇.၃% ကျဆင်းခဲ့သည်။
ဤအချိန်အတောအတွင်း Firefox သည်တစ်ချိန်တည်းအတွင်း ၉% မှ ၁၄.၆% သို့ချဲ့ခဲ့သည်။ ဒါကအကြမ်းအားဖြင့်နှစ်နှစ်အတွင်း ၅.၆% တိုးလာတာပါ။
Safari သည် ၃.၁% မှ ၄.၇၇% သို့သွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပြောရန်မသင့်လျော်သောတိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့ Firefox ဟာ IE ကိုရနေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် IE မှာ 5x ထက်ပိုသောသုံးစွဲသူများရှိနေဆဲပါ။
ဤအချက်အလက်များသည်ဝီကီပီးဒီးယားမှ“ Usage_share_of_web_browsers” မှဖြစ်ပြီးတစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းဘေးဖယ်ထားနိုင်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူအများစုသည်ဝဘ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များ၏ထင်မြင်ချက်များကိုဂရုမစိုက်ကြပါ။ ကိုယ့်အကြိုက်ကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘဲလူထုအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်။
22:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 8, 48
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Rick! စာရင်းဇယားနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်၏အရင်းအမြစ်များကိုဘယ်မှာမေးသလဲ။
ငါသဘောတူတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဝဘ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုဂရုမစိုက်ဖို့သတိပေးပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ စျေးကွက်ဝေစု ၈၅.၈၈% ကိုနှစ်ခြိုက်ဖို့အတွက်စံချိန်စံညွှန်းပြင်ပကိုဒီဇိုင်းထုတ်မယ်ဆိုရင် ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်းကစျေးကြီးတဲ့စွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်!
22:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 2, 25
လူအများစုအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းသည်အမြဲတမ်း ဦး စားပေးချက်ဖြစ်သော်လည်းမိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည်အခြားလူအားလုံးနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်များကိုပိုမိုခက်ခဲစေသည်။ တစ်ခါတလေ IE တစ်ယောက်တည်းအတွက်ပဲသီးခြား style sheets တွေရေးဖို့လိုတာကြောင့်အချိန်ကုန်ရတယ်။ ဒါဟာသာမန်အသုံးပြုသူအတွက်ဘာမှမဆိုလိုဘူး Pack ကို ဦး ဆောင်သော browser သည် web စံနှုန်းများနှင့်အညီအနည်းဆုံးဖြစ်သည့်အခါစိတ်ပျက်စရာပင်။
22:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 3, 44
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်လူများကိုပိုမိုတောင်းခံနိုင်မည်ကိုသင်အဘယ်ကြောင့်စိုးရိမ်ရမည်ကိုမသေချာသော်လည်းဒီဇိုင်နာ၏အမြင်မှသင်၏စိုးရိမ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အငြင်းပွားစရာမရှိပါ။ လူများက၎င်းအတွက်ပေးချေရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသလား။ သိသာထင်ရှားတဲ့သည်ဤကျော်လွှားရန်ရှိသည်သောနည်းပညာဆိုင်ရာကိစ္စများဖြစ်ကြသည်။
IE မှဝေးကွာသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရှိနေသည်ဟူသောအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်တော်ပြissueနာတက်သည်။ FS ကိုအစဉ်မပြတ်မြှင့်တင်ပေးသည့်ပုံစံအတိုင်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူများနှင့် SEO များကြားမှ (stats (ကျွန်တော်ပြောနိုင်သလောက်) သည်ထိုပြောဆိုချက်ကိုမထောက်ခံပါ။ ) သူတို့မြှင့်တင်သင့်လား၊ မပေးသင့်လားဆိုတာကနောက်ထပ်မေးခွန်းတခုဖြစ်တယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့လုံးဝမှားသွားနိုင်တယ်။
23:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 5, 42
ကိစ္စနှစ်ခုလုံးမှာသင်မှန်ကန်ကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ Rick ငါက IE သည်ဈေးကွက်၏အဓိကဝေစုဆက်ရှိနေသေးသော်လည်း၎င်းသည် Operating System ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်နှင့်မျှတသောရွေးချယ်မှုအတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်လျှင် FF သည်သူတို့၏ခြေထောက်များကိုကန်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်အမှန်ပင်ယုံကြည်ပါသည်။
ဒီဇင်ဘာ 21, 2007 မှာ 6: 51 AM
ငါပရိုဂရမ်မာများနှင့်ဝဘ် developer ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာငါမတော်တဆမှုတစ်ခုကြုံခဲ့ရပြီးခေါင်းကိုထိခဲ့တယ်။ Code ရေးတာကငါ့အတွက်အရမ်းများလွန်းတော့အခုတော့ငါကသာမန် joe..lol ပဲ
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှစ၍ Linux ကိုသုံးခဲ့သည်။ (Caldera-1996 ကိုကိုယ်တိုင် download လုပ်ပြီး ၂ ရက်လောက်ကြာအောင်သတိရပါ။ ) Firefox မတိုင်မီ web browser များဘယ်တော့မှအဆင်မပြေခဲ့ကြပါ။ Firefox ထွက်ပေါ်လာသောအခါ၎င်းသည် Linux သုံးစွဲသူများအတွက်အကြီးမားဆုံးသောအရာဖြစ်သည် (Thunderbird လည်း) ။ Microcrap ဟာ Linux သုံးစွဲသူများကိုအမြဲတမ်းတွန့်ဆုတ်နေသောကြောင့်သူတို့ဟာသူတို့ကိုခြေထောက်ပေါ်ပစ်ချခဲ့ကြသည်။ Firefox / Thunderbird ဟာ Linux အတွက်အကောင်းဆုံး internet suite ဖြစ်လာတာမှတ်မိသေးတယ်။ ၎င်းသည်ကြီးမားလွန်းခြင်းမရှိဘဲသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောမည်သည့် extension ကိုမဆိုထည့်နိုင်သည် (adblockl!) ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သင်ပြုလုပ်သည့်အတိုင်းပေါ့သည်သို့မဟုတ်လေးလံသည်။ အားလုံးမလိုချင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများ။ tabs များသည်အေးမြ။ သေးငယ်သည်။
လောလောဆယ်ငါ Windows xp ကိုသုံးနေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာအခြားသူတွေကကံမကောင်းတာကဒီ pc ကို ၀ ယ်ဖို့အခြေအနေဖြစ်လို့ 'သူတို့' (idiots) သုံးနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် Firefox / thunderbird ကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းကူးယူခဲ့တယ်။ ငါ Windows ကို ထပ်မံ၍ အသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်သည် HATED Outlook Express နှင့် extensions များနှင့်အတူ Firefox ကိုပြန်လိုချင်ခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်သည် config ။ files နှင့် bookmark များအားလုံးကို Linux မှသိမ်းဆည်းပြီး Winxp သို့တင်သွင်းခဲ့သည်) ။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည်တစ်ညလုံးပြန်လည်စတင်သွားပြီး၎င်းသည်ပျောက်ကွယ်မသွားနိုင်သောကြီးမားသော tabs များရှိသည့်ဤ ALIEN ပုံစံအဆီ toolbar ကိုရရှိသည်။ friggin toolbar များသည်မျက်နှာပြင်၏ ၁/၅ ကိုယူထားသည်။ ငါမုန်းတယ်! ဒီမှာတခြားသူတွေလည်းမုန်းတယ်။ STOP ခလုတ်ဘယ်မှာလဲ။ မည်သူမျှ browser ကိုဤမျှလောက်အာကာသတက်ယူရှိသည်ဖို့လို! စာမျက်နှာ ၁ ခုသာရှိသည့်တိုင်ကြီးမားသော tabs များ !!
ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကော။ သင်ပင်မြင်မရနိုင်ပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်မြင်တွေ့ရသမျှအားလုံးသည် Browser ဖြစ်သည်! အရမ်းအာရုံပျံ့လွင့်ပြီးငါမခံရပ်နိုင်ဘူး။ Microsoft အနေဖြင့်တိုင်ကြားရန်နေရာမရှိပါ။ အမှိုက်သရိုက်အမှိုက်ပုံပုံ။ ကျွန်ုပ်၏ဖန်သားပြင် resolution သည် ၁၁၅၂ × ၈၆၄ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 1152 × 864 နှင့်မည်သို့မည်ပုံပုံဖော်မည်ကိုကျွန်ုပ်မစဉ်းစားနိုင်ပါ။ ငါစာမျက်နှာကိုတောင်ကြည့်နိုင်မလား?
ဒီတော့ IE2 အတွက်လက်မ ၂ ခုချထားလိုက်။ လူတိုင်းကအဲဒါကိုမုန်းတယ်၊ ဒါက IE သေဆုံးမှုပဲ။ ရယ်စရာကောင်းတယ်၊ သူတို့မှာ browser ကောင်းကောင်းရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ Firefox ကိုကော်ပီကူးလိုက်ရင်အခုသူတို့ junk တွေလုပ်နေတယ်။ ငါဆိုလိုတာက .. toolbars ပေါ်ရှိအရာအားလုံးကဘာလဲ။
ဒါကြောင့်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ယခုတွင်ငါသည်သူတို့၏ browser ကိုရုတ်တရက်ရွားလှနှင့်ရှုပ်ထွေးသောသည်အဘယ်ကြောင့်မေးမြန်းသူကိုမေးနှင့်အခြားသူများအားရှင်းပြဖို့အချိန်အများကြီးဖြုန်းနှင့်သူတို့ကို IE7 ကို uninstall ကူညီ! ဘယ်သူမှမလိုချင်ကြဘူး။
မေလ 28, 2008 မှာ 12: 30 pm တွင်
မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်အရ Mr. Blog man၊ ကျွန်ုပ်ကွန်ပျူတာကိုတစ်နှစ်ကျော်ကြာမှ Firefox ကိုသုံးနေခဲ့ပြီးနောက်မှပြန်လှည့်မကြည့်တော့ပါ။ ကွန်ပျူတာဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပါတ်သက်ပြီးသိထားသူမည်သူမဆို Firefox သည်သာလွန်ကောင်းမွန်သောဘရောက်ဇာဖြစ်သည်ဟုသင့်ကိုပြောပြနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Thunderbird ဆော့ဝဲလ်ကိုတစ်ခါမှမစမ်းသပ်ခဲ့ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Office Enterprise ရှိ Outlook 2007 သည်အလွန်ကောင်း။ ကျွန်ုပ်အတွက်ကောင်းမွန်သောအလုပ်ဖြစ်သည်။ ဖဲ့မရင့်ဖြစ်လျှင်ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲပစ်ပါ။ IE 6-7 ပျက်နေပေမယ့်သူငယ်ချင်း၊ မိသားစု၊ online buddy ဒါမှမဟုတ် Firefox ရအောင်အမြဲတမ်း install လုပ်ဖို့ပြောမယ့်သူတစ်ယောက်တည်းပဲလုပ်ရတယ်။ အဲဒါကျွန်တော့်စာအုပ်ထဲမှာမရှိဘူး။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကသူတို့ကသာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ browser တစ်ခုထုတ်ပေးတယ်လို့သူတို့ဘာကြောင့်ထင်တာလဲ။ သူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလုံးဝမကျွမ်းကျင်ဘူးလားဆိုတာပဲလား။ သူတို့ဆော့ဗ်ဝဲကအရမ်းကိုအံ့သြစရာကောင်းတာကလူတွေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါကိုသုံးလို့ရလို့လား။ သို့မဟုတ်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည်တစ်နေ့လျှင်ဘီလီယံနှင့်ချီ။ “ သူတို့စဉ်းစားတာကိုဂရုမစိုက်တဲ့စားသုံးသူကိုမေ့လိုက်တယ်” ဟုပြောသောကြောင့်သူတို့ကစျေးကွက်ထဲတွင်တန်ဖိုးမရှိသော၊ Idiots! ကျွန်ုပ်တွင်ကွန်ပျူတာမရှိသောကြောင့်ကွန်ပျူတာသည်မည်သည့်စနစ်နှင့်မဆို crap ကဲ့သို့ပြေးသည်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲကုဒ် (သို့) တစ်ခုခုထဲမှာဖြစ်ရမယ်။
ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ၊ ဒီနေ့နင့်ကိုတက်လိုက်တာကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းလာပြီလားဆိုတာကြည့်ဖို့ပဲ။ ထိုအခါ“ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ” ဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးမိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် (အဘယ်ကြောင့် Internet Explorer အလွန်နှေးကွေးနေသနည်း) ကိုရှာဖွေပြီး Firefox ရှိ Google home page ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ အခြား site တစ်ခုမှ link တစ်ခုအောက်တွင်ဤကဲ့သို့သောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါသွားသည်။ ငါဘေးထွက်ခြေရာခံတယ်ဒါကြောင့်ငါနေဆဲငါ့အဖြေကိုမရှိသေးပါ။ Firefox Go ကိုသွားပါ လူတစ် ဦး ချင်းစီကိုတစ်ကြိမ်စီတစ်ယောက်ချင်းစီအတွက်ဘီလ်ဂိတ်စ်ကိုအနှောက်အယှက်ပေးပါ။ မှတ်စုတစ်ခုက FF ဆီကိုပြန်သွားတာသတိထားမိလိမ့်မယ်၊ မှတ်ဥာဏ်သုံးစွဲမှုမကောင်းဘူး။ အလွယ်တကူသတ်မှတ်ထားသောအတွေး၊ အမြန်မဟုတ်နှေးကွေးသောပြန်လည်စတင်မှုသည်၎င်းကိုဖြေရှင်းလိမ့်မည်။